May 2020 - MinSayYar
‘ဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ ‘မင်းညီ မင်းသားတွေ မဖူးရ’ အမိန့်တော် ထုတ်ပြန်ပြီး သော့ခတ်လို့ိ အစောင့် တွေ ချထားခဲ့ရတဲ့ ဆုတောင်းပြည့်ရုပ်ပွားတော်မြတ်’
စစ်ကိုင်းတောင် တစ်ဖက်ကမ်းကရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျဘုရားတွေဖြစ်ပြီး ဒီဆုတောင်းပြည့်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ ရွှေကြက်ယက်စေတီအတွင်းမှာ ရှိပါတယ် ။ အနော်ရထာမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်…၊ နရပတိစည်သူမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်… မည်သည့်မင်းညီမင်းသားမှ မဖူးရလို့အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်ပြီး အစာင့်တွေချထားကာ သော့ခတ်ထားခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ရှေ့ကို တနေ့ကရောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားကိုဖူးတွေ့လိုက်တာနဲ့ .. ‘ အို … သပ္ပါယ်လိုက်တာ ‘ လို့ ပါးစပ်က ရောင်ရမ်းပီး ထွက်သွားမိတဲ့ အထိပါပဲ …။ တကယ့်ကို ရင်ထဲမှာ အေးချမ်းသွားအောင် သပ္ပါယ်လိုက်တာ … ။ စပါယ်နဲ့ ဇွန်းပန်းတွေကို ရင်ဘတ်တော်မှာ ပူဇော်ထားတာကလည်းမွေးကြိုင်နေတာပါပဲ ။ရွှေသင်္ကန်းကပ်ပြီး ဆုတောင်းခဲ့မိတာလေးဟာတစ်ကယ်ပြည့်ဝခဲ့တာမို့ သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်မိခဲ့ပါတယ်..။ ဆုတောင်း ပြည့်ဝလွန်းတယ်ဆိုတဲ့ဇတ်ကြောင်းလေးကိုဖတ်မိရင် ပိုပြီးလေးနက်စေမှာမို့ ဇတ်လမ်းလေးကိုအတိုချုပ်လို့ ရေးပါရစေ …။ ပုဂံနေပြည်တော်မှာ မင်းယဉ်နရသိင်္ခ ဘုရင် အုပ်စိုးချိန်မှာ အိမ်ရှေ့စံညီတော်ကတော့ […]
သင့် မှာ ယခု အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်နေပြီလား
သင့်နာမည်၊ဂုဏ်သတင်း အောင်မြင်ကျော်ကြား ၊ကြီးပွား ဖို့ ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်နေပြီလား?သင့်မိတ်ဆွေကော? ဤလမ်းကြောင်းအားအောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းဟုခေါ်ပြီးလက်သူကြွယ်၏ခြေရင်း တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ခုံအပေါ်သို့ ထိုးတက်သွားသောလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကံလမ်းကြောင်းလည်းကောင်းမွန်နေမည်ဆိုပါကသင့်အားဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားခြင်း၊အောင်မြင်ကျော်ဇောခြင်းတို့ကို အာမခံချက်ပေးမည်ဖြစ်ပေသည်။ထိုလမ်းကြောင်းအားမှန်ကန်စွာဖတ်နိုင်ပါကအောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှုရှိ/မရှိ|ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းရှိ/မရှိ|ချီးမြှင့်မြှောက်စားခံရခြင်း ရှိ/မရှိ|သြဇာတိက္ကမရှိ/မရှိ|ဓနဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းရှိ/မရှိ|ဆွဲဆောင်နိုင်မှုရှိ/မရှိ|ပညာ-အတတ် ပညာဖြင့် အသက်မွေးရခြင်းရှိ/မရှိ|စာပေအနုပညာဖြင့့် ကျော်ကြားမှုရှိ/မရှိ| နာမည်|ဆိုင်းဘုတ်|ပရိသတ်နှင့်လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ|အထွဋ်အထိပ်ရောက်/မရောက်စသည် ဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြထားသောပုံကားလက်ကောက်ရစ်ပေါ်မှထွက်ပေါ်လာသောအောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး လက္ခဏာရှင်အား မိမိနေထိုင်ရာအရပ်၌ပင်အများ၏ကြည်ညိုလေးစားခံရစေခြင်း|သြဇာအာဏာရှိစေခြင်း| ဘုန်းတန်ခိုးကြီးစေခြင်း|ကြွယ်ဝချမ်းသာစေခြင်း|ပါရမီရှင် ဖြစ်စေခြင်း|ကျော်ဇောထင်ရှားစေခြင်း|ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး နာမည်ကောင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့အားပေးစွမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ လင်းထင်ကျော် Unicode သင့််နာမည်၊ဂုဏ်သတင်း အောင်မြင်ကျော်ကြား ၊ကြီးပွား ဖို့ ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်နေပြီလား?သင့်မိတ်ဆွေကော? ဤလမ်းကြောင်းအားအောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းဟုခေါ်ပြီးလက်သူကြွယ်၏ခြေရင်း တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ခုံအပေါ်သို့ ထိုးတက်သွားသောလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကံလမ်းကြောင်းလည်းကောင်းမွန်နေမည်ဆိုပါကသင့်အားဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားခြင်း၊အောင်မြင်ကျော်ဇောခြင်းတို့ကို အာမခံချက်ပေးမည်ဖြစ်ပေသည်။ထိုလမ်းကြောင်းအားမှန်ကန်စွာဖတ်နိုင်ပါကအောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှုရှိ/မရှိ|ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းရှိ/မရှိ|ချီးမြှင့်မြှောက်စားခံရခြင်း ရှိ/မရှိ|သြဇာတိက္ကမရှိ/မရှိ|ဓနဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းရှိ/မရှိ|ဆွဲဆောင်နိုင်မှုရှိ/မရှိ|ပညာ-အတတ် ပညာဖြင့် အသက််မွေးရခြင်းရှိ/မရှိ|စာပေအနုပညာဖြင့့် ကျော်ကြားမှုရှိ/မရှိ| နာမည်|ဆိုင်းဘုတ်|ပရိသတ်နှင့်လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ|အထွဋ်အထိပ်ရောက်/မရောက်စသည် ဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြထားသောပုံကားလက်ကောက်ရစ်ပေါ်မှထွက်ပေါ်လာသောအောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး လက္ခဏာရှင်အား မိမိနေထိုင်ရာအရပ်၌ပင်အများ၏ကြည်ညိုလေးစားခံရစေခြင်း|သြဇာအာဏာရှိစေခြင်း| ဘုန်းတန်ခိုးကြီးစေခြင်း|ကြွယ်ဝချမ်းသာစေခြင်း|ပါရမီရှင် ဖြစ်စေခြင်း|ကျော်ဇောထင်ရှားစေခြင်း|ဘွဲ့့ထူးဂုဏ်ထူး နာမည်ကောင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့အားပေးစွမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ လင်းထင်ကျော် CRD
ပန်းနာရင်ကျပ်၊ဗိုက်အောင့်ခြင်းနှင့် နားကိုက်ဝေဒနာနှင့် သွေးတိုးကျစေသည့့် ရှမ်းနံနံ
ပန်းနာရင်ကျပ်၊ဗိုက်အောင့်ခြင်းနှင့် နားကိုက်ဝေဒနာပျောက်ကင်းသော ရှမ်းနံနံ ရှှမ်းနံံနံံသာ ပြောရတယ်၊ ရှမ်းတွေပဲစားကြတဲ့ ဟင်းခတ်မဟုတ်ပါဘူး။ မွန်ဟင်းတွေမှာလည်းပါတယ်၊ ရခိုင်ဟင်းတွေမှာလည်းပါတယ်၊ မြန်မာဟင်းတွေမှာလည်းပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားက နေရာဒေသအမျိုးမျိုးရဲ့ ဒေသအစားအစာတွေမှာ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် အသုံးများတယ်ဆိုပေမယ့် ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်မှာ စားခဲ့ရတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးမှာ ရှမ်းနံနံတွေနိုင်းချင်းထည့်စားကြတာတွေ့ဖူးတယ်။ ရှှမ်းနံနံက အစိမ်းပဲစားစား၊ ဟင်းထဲပဲ ခတ်ခတ် အညှီပျောက်တယ်၊ ဟင်းအနံ့ကိုပိုမွှေးစေတယ်လေ။အစကတော့ မြန်မာမှာပဲ သုံးကြတယ်ထင်နေတာ။ သူ့နာမည်က ရှမ်းနံနံဆိုတာကိုး။ ဒါ်ပေမယ့် သူ့အကြောင်းရှာကြည့်လိုက်တော့မှ မက္ကဆီကိုနဲ့ တောင်အမေရိကမှာရော၊ ကာရေးဘီးယား၊ လက်တင်အမေရိကတို့မှာပါ အသုံးများတာသိလိုက်ရတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်လို့ ဆေးတွေတောင် ထုတ်တာနော်။ သွေးတိုးကတြယ်၊ အစာကြေတယ်၊ စတဲ့ကျန်းမာရေးအကြိုးကြျေးဇူးတွေကြောင့် အေရွ့တောင်အာရွမွာဆို မြန်မာအပြင် အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ထိုင်းမွာလည်း စားသုံးကြပါတယ်။ ထိုင်းဟင်းလြာတွေမွာဆို နံနံပင်အမြဈ၊ ရွမ်းနံနံအမြဈတွေထောင်းထည့်တော့ မွေးနေရော။ သူတို့တွေဆီမွာ ဘယ်ရောဂါတွေအတွက် […]
ပျားရည်အစစ်အတုခွဲနည်းနှင့် ပျားရည်၏အစွမ်း ပျားရည်ဟာ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးသော အာဟာရတခုဖြစ်သလို အကောင်းဆုံးသော ဆေးတမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပျားရည်ဟာ နှုတ်ကိုမြိန်စေတယ်။ဝမ်းမီးကိုတောက်စေတယ်။ပျို့အန်ခြင်းကိုတားမြစ်တတ်တယ်။ရေငတ်ပြေစေနိုင်တယ်။ခြောက်တတ်စေတယ်။တွန့်ရှုံ့စေတတ်တယ်။သွေးယိုစီးခြင်း၊ဝမ်းသက်ခြင်းကိုပိတ်စေတယ်။ ကြို့ထိုးခြင်းကိုပျောက်စေတယ်။ဝမ်းတွင်းရှိပိုးကို သတ်တတ်တယ်။အေးတယ်။ကြေကျက်လွယ်တယ်။နူးညံ့တယ်။ရသကြောတွင်းသို့ဝင်၍ ရသကြောတို့ကို သုတ်သင်တတ်တယ်။ ပျားရည်၏မူလအရသာမှာ ချိုသော်လည်း အဖန်ဓာတ်လည်း အတွင်းမှာကိန်းတယ်။ဒေါသသုံးပါးကို ကင်းစေတယ်။ အချို့အချိန်တွင် ပျားရည်သည် လေကိုပြုတတ်သော်လည်း လေဖောက်ပြန်ရာ၌၎င်း၊ဆောင်းဥတု၌၎င်း၊ပျားရည်ကိုသုံးဆောင်ရမည်။ပျားရည်ကိုသောက်သော် အသံကောင်းတယ်။ ကိုယ်နူးညံ့တယ်။အရောင်အဆင်းကို ဖြစ်စေတယ်။သုက်ကိုပွါးစေတယ်။ခွန်အား၊အသိဉာဏ်၊ကာမသတ္တိကိုအားပေးတယ်။ မွတ်သိပ်ခြင်းကင်းစေ၍ နှစ်သက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ရောင်ရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။မျက်စိရောဂါကိုလည်းကောင်းမွန်စေတယ်။အရက်အလွန်သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ ၊တွေဝေခြင်းနှင့် နှလုံးရောဂါများကိုပျောက်ကင်းစေတတ်တယ်။သလိပ်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တယ်။ချောင်းဆိုးနဲ့ပန်းနာတို့၌အကျိုးပြုတယ်။ ပိုးကိုနိုင်ခြင်း၊အဆိပ်ကိုနိုင်ခြင်းကြောင့် အနာများပေါ်မှာလိမ်းကျံပေးသင့်တယ်။အနာများ၌အကြောများပုပ်ခြင်းကို အပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်။အနာများကိုစင်ကြယ်စေ၍ အသားနုတက်စေနိုင်တယ်။အရိုးကျိုးခြင်း၊အသားကွဲခြင်းကို ဆက်စေနိုင်တယ်။ နူနာ၊မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်း၊ပူလောင်ခြင်း၊သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊သလိပ်ရောဂါ၊ဝလွန်းခြင်း၊တူလာသရောနာ၊ချုပ်ခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်ခြောက်ခြင်း၊ခယရုပ်ရောဂါ၊အဆုပ်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်တယ်။ ဤအကျိုးစွမ်းရည်တို့ကို ပျားရည်အစစ်ကသာလျှင် ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ပျားရည်အတုကို အစစ်ထင်ပြီး အသက်ရှည်ဆေး၊အားတိုးဆေး စသောဆေးနည်းတို့မှာထည့်သွင်းပြီး စားသုံးမိရင်တော့ လိုအပ်သောအကျိုးမပြီးပဲ ဘေးဒုက္ခတွေသာရတတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤပျားရည်စစ်မစစ်ခွဲခြားနည်းကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ၁။ပျားရည်ကိုရေအေးဖန်ခွက်တွင်ထည့်ပါ။စုခဲထိုင်နေကစစ်သည်ဟူ၍မှတ်ပါ။သာမန်စုခဲခြင်း၊အရည်ကျဲ၊ပွဖောင်းစုခဲနေခြင်း၊ရေနှင့်ရောသွားခြင်းဖြစ်မူ အတုဟုမှတ်ပါ။ ၂။စက္ကူဖြူဖြူပေါ်တွင်(အပွသား ကောင်း၏)ပျားရည်စက်ကိုချပါ။ပြန့်သွားခြင်း၊အောက်သို့စိမ့်ဝင်သွားခြင်းဖြစ်မူ မစစ်။ ၃။ဒုတ်ချောင်းတွင်ပျားရည်တို့၍မီးရှို့ပါ။မီးတောက်လျှင်အစစ်။မီးအနည်းငယ်တောက်ပီးမှ […]
မျှစ်ကိုကြိုက်လို့သာ စားနေတာ အခုကစပြီး အရင်ထက်ပိုပြီး စားဖြစ်အောင်စားရတော့မယ် . . .
မျှစ်အကြောင်းကို မသိပဲ ကြိုက်လို့သာ စားနေတာ..အခုကစပြီး အရင်ထက်ပိုစားတော့မယ်…ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်လိုက်နော် မြန်မာ လူမျိုးတွေက မျှစ်ကို ကြော်ချက်ပြီး ဟင်းလျာ အမျိုးမျိုး ပြုလုပ် စားသောက် တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှစ်တွေကို ဆေးဆိုးထားတယ် ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်လာပြီးနောက်မှာ မျှစ်ကို စားဖို့ လက်တွန့် သွားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးမဆိုး ထားတဲ့ မျှစ်တွေကို ရွေးချယ် စားသောက်ဖို့ အကြံပြုရင်း မျှစ်ကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး စွမ်းပကားတွေကို ရေးသား လိုက်ရပါတယ်။ (၁) အစာခြေစနစ်ကျန်းမာ ခြင်းမျှစ်ဟာ အစာအိမ်ရဲ့ အစာချေဖျက်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းမွန်စေ ပါတယ်။ မျှစ်ဟာ အစာအိမ် ဝေဒနာကို သက်သာစေပြီး ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါကိုလည်း သက်သာစေပါ တယ်။ (၂) နာတာရှည်ရောဂါ […]
အလယ်တန်း အထက်တန်း ကျောင်းသူဘဝတုန်းက ကျောင်းတက်ရင် အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေက မေးကြတယ် ” နင့်အဖေ ဘာလုပ်လဲ နင့်အမေ ဘာလုပ်လဲ ” လို့ မေးရင် ကျွန်မအရမ်းအားငယ်ရတယ် ဝမ်းနည်းမိတယ် ” ငါရဲ့ဖေဖေက စက်ချုပ်တယ် ငါ့ရဲ့မေမေက ထမင်းချက်တယ် ” ဆိုတဲ့ အဖြေကို မရဲမဝဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖြေခဲ့ရတယ် ( ” ငါ့ဖေဖေက အင်ဂျင်နီယာ ငါ့မေမေက ဒေါက်တာ ” ဆိုပြီး တချို့သူငယ်ချင်းတွေလို ဂုဏ်ယူဝဲ့ကြွားစွာ ဖြေချင်မိတယ် ) ဒါပေမယ့် … ကျွန်မ အဖေက စက်ချုပ်တယ် အမေက ထမင်းချက်တယ် တနေ့တော့ …” ဖေဖေ … သမီးကိုလေ သူငယ်ချင်းတွေက မေးကြတယ် ဖေဖေမေမေက ဘာလုပ်တာလဲ […]
မိမိအသက်ရှင်ရေးအတွက် လာရောက်လှူဒါန်းပေးသော သွေးလှူရှင်အား လာရောက်ကန်တော့နေသည့်သမီးလေး
မိမိအသက်ရှင်ရေးအတွက် လာရောက်လှူဒါန်းပေးသော သွေးလှူရှင်အား လာရောက်ကန်တော့နေသည့်သမီးလေး သွေးလှူရှင် အံ့သြလောက်အောင် ခေါင်းထောင် ကြည့်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခု ကြည်နူးစရာ ပုံရိပ်တစ်ခု…ဤပုံကိုကြည့်ပါ…..တန်ဖိုးသိသူတိုင်း မြင်နိုင်ပါသည် ။သွေးသည်အသက် အသက်သည်သွေး မိမိအသက်ရှင်ရေးအတွက် လာရောက်လှူဒါန်းပေးသော သွေးလှူရှင်အား လာရောက်ကန်တော့ နေသည်မှာ အရွယ်နှင့်မမျှ ကျေးဇူးတရား သိတက်ပုံကို ပြသလိုက်သည်မှာ သွေးလှူရှင် အံ့သြလောက် အောင်ခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီး..။ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရမည်မှာ မလွဲဧကန်ပါ ဆင်းရဲပေမဲ့ ကျေးဇူးတရား သိတက်လှပေသည်။ သွေးတစက်၏ တန်ဖိုးကို သိတက်သည့် လူဆင်းရဲ၏ မိသားစုက ပေါက်ဖွားလာသော သမီးဖြစ် နိုင်ပါသည် ။တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်။ တန်ဖိုးမသိက တန်ဖိုးဆုံရံးှုနိုင်ပါသည်။ တချို့သောသူများသည် မိမိအခက်အခ ဲမိမိအတ္တကိုရှေ့တန်းတင်ကြသည်။ တချို့က ငွေဂုဏ်မောက်ပြီး မာန်တက်နေကြသည် ။တချို့က မတူသလို မတန်သလိုဆက်ဆံကြသည်။တချို့က လိုသုံးလုပ်ကြသည်။တချို့က မယုံကြည်သလိုနှင့် မေးခွန်းပေါင်းများစွာ […]
ကိုဗစ်ရောဂါရှိ မရှိ အချိန် ၁၀ မိနစ်ဖြင့် သိရှိနိုင်တော့မည်…
ကိုဗစ်ရောဂါရှိ မရှိ အချိန် ၁၀ မိနစ်ဖြင့် သိရှိနိုင်တော့မည်… Covid-19 အတွက် နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များ (၉) ပိုမိုတိကျ လွယ်ကူ မြန်ဆန် ဈေးသက်သာလာမည့် COVID_Test အမေရိကန်နိုင်ငံ University of Maryland က School of Medicine မှ Dr Dipanjan Pan ဦးဆောင်တဲ့ သုသေသနပညာရှင်တွေဟာ COVID-19 ဖြစ်စေတဲ့ SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး လူမှာရှိ မရှိ အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးစစ်လို့ရမယ့်နည်းတစ်ခုကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ University of Maryland ဟာ Covid RNA vaccine ကာကွယ်ဆေးကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးစအပြီးစမ်းသပ်တဲ့ ဆေးပညာကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနည်းကို Nake-eye detection of SARS-CoV-2 လို့ခေါ်ပါတယ်။ […]
တောင်ပေါ်အမြင့် ပေ၃၀၀ခန့်မှ (၁၃) ပေ ပတ်လည်ခန့်ကျောက်တုံး ကျောင်းခေါင်မိုးပေါ် ပြုတ်ကျ၍ သံဃာတော်တစ်ပါး ပျံလွန်တော်မူ
တောင်ပေါ်အမြင့် ပေ၃၀၀ခန့်မှ (၁၃) ပေ ပတ်လည်ခန့်ကျောက်တုံး ကျောင်းခေါင်မိုးပေါ် ပြုတ်ကျ၍ သံဃာတော်တစ်ပါး ပျံလွန်တော်မူ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ် ဘင်ဂျီကျေးရွာအုပ်စုဘုရင်ညီ‌နောင်ဂူဘုရား လှိုင်ဂူဝအနီးရှိကျောင်းကြီးကျောင်းတွင်သီတင်းသုံးနေသော ဦးပဇ္ဇင်းဦးပညာ သက်တော် (၂၇) ဝါတော် (၇) ဝါသည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ဆွမ်းခံရာမှပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး အနားယူနေစဉ် ဘုရင့်ညီနောင် တောင်ပေါ်အမြင့်ပေ (၃၀၀) ခန့်မှ (၁၃) ပေပတ်လည်ခန့် ကျောက်တုံးမှာ ‌ကျောင်း၏‌ခေါင်မိုးပေါ်သို့ ပြုတ်ကျခဲ့ရာ ဆရာတော်တွင် ဦးခေါင်းထိတ်ပေါက် ဝဲ/ယာ လက်ကျိုးကြေ ဝဲခြေသားလုံးကျိုးကြေ ဒဏ်ရာများရရှိကာ ပျံတော်မူသွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဆရာတော်သည် မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းမြို့နယ် ကြိုးဝိုင်းကျေးရွာဇာတိဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော(၆) နှစ်ခန့်မှ လာရောက်သီတင်းသုံ နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်‌ကြောင်း သိရသည်။ Crd ; မင်းသူ(ဘားအံ) Ko HtetAung Unicode … […]
သွေးလှူရှင် အံ့သြလောက်အောင် ခေါင်းထောင်ကြည့်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု . . . .
သွေးလှူရှင် အံ့သြလောက်အောင ခေါင်းထောင်ကြည့်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု.. ကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခု…ဤပုံကိုကြည့်ပါ…တန်ဖိုးသိသူတိုင်း မြင်နိုင်ပါသည်။ သွေးသည်အသက် အသက်သည်သွေး မိမိအသက်ရှင်ရေးအတွက် လာရောက်လှူဒါန်းပေးသော သွေးလှူရှင်အား လာရောက်ကန်တော့နေသည်မှာ အရွယ်နှင့်မမျှ ကျေးဇူးတရား သိတက်ပုံကိုပြသလိုက်သည်မှာ သွေးလှူရှင် အံ့သြလောက် အောင်ခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီး ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရမည်မှာ မလွဲဧကန်ပါ။ ဆင်းရဲပေမဲ့ ကျေးဇူးတရားသိတက်လှပေသည်။သွေးတစက်၏တန်ဖိုးကို သိတက်သည့် လူဆင်းရဲ၏ မိသားစုက ပေါက်ဖွားလာသော သမီးဖြစ် နိုင်ပါသည်။ တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်။ တန်ဖိုးမသိက တန်ဖိုးဆုံရှုးနိုင်ပါသည်။ တချို့သောသူများသည် မိမိအခက်အခ ဲမိမိအတ္တကိုရှေ့တန်းတင်ကြသည်။ တချို့ကငွေဂုဏ်မောက်ပြီး မာန်တက်နေကြသည်။ တချို့က မတူသလို မတန်သလိုဆက်ဆံကြသည်။ တချို့က လိုသုံးလုပ်ကြသည်။တချို့က မယုံကြည်သလိုနှင့်မေးခွန်းပေါင်းများစွာ မေးကြသည်။ တချို့က ရန်တွေ့ကြသည်။လူအမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ ကျေးဇူတင်ရကောင်းမှန်း မသိကြပါ။ ဤနေရာ ကျွန်ုပ်သာဆိုလျင် ဝမ်းသာပီတိမျက်ရည်ကျမိမှာ အမှန်ပင်…..ကလေးမိဘများလည်း ဝမ်းသာပီတိမျက်ရည်ကျမိမယ် ထင်ပါသည်။ ဒါဟာ […]